Ahụmahụ Semalt Expert Site Islamabad: Esi Gbochie Darodar Ghost Referrers
Darodar.com na-egosipụtakarị na ndepụta ntinye aka nke profaịlụ Google Analytics, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ dịghị ezitere gị ezigbo okporo ụzọ. Ị nwere ike ịhụ nleta ndị ọhụụ, ha niile nwere ọnụego 100% na efu elekere gara aga na ebe nrụọrụ weebụ gị - free sql hosting php. Darodar.com na-etinye aka na omume a maara dika spam na-ezochite. Ebe nrụọrụ ahụ na-eme ka ọ na-enye ezigbo okporo ụzọ, ma ọ dịghị. Darodar.com na-ebipụta ndepụta nke ndị na-ede aha ya kachasị mma, ndị spammers kwenyere na site n'ịbanye n'ime listi ndị a nweta akara azụ azụ .
Ihe ọzọ kpatara ya bụ na ha nwere olileanya na ị ga-aga na ebe nrụọrụ weebụ ha ma zụta ihe site na njikọ njikọta ha. N'ihe ọ bụla, darodar.com bụ nwa ojii SEO ụlọ ọrụ na-ekwe nkwa ịbawanye okporo ụzọ gị, mana ọ na-arụ ọrụ ndị ahụ na usoro iwu na-akwadoghị na nke na-enweghị isi.
Sohail Sadiq, onye ọkachamara ọkachamara si Semalt, na-enye ebe a ndụmọdụ ụfọdụ dị mkpa na nke a.
Olee otú spam na-edekọ si emetụta data?
Ihe ọ bụla ebumnuche nke spam na-ezo, nke a na-emetụta data Google Analytics. Otu n'ime ihe bụ isi kpatara iji GA mee bụ iji chọpụta ebe nrụọrụ weebụ na-eziga gị okporo ụzọ ziri ezi na ndị na-etinye aka na usoro izipu ahia na-ezighị ezi. Ọ dịkwa mkpa ịmara ebe saịtị kachasị mma na nsonaazụ ọchụchọ search na otu esi emezi atụmatụ gị iji nweta njikọ ọhụrụ.
Ọnụ ọgụgụ mgbagwoju anya na oge ejiri na saịtị gị dị mkpa dịka ndị a na - eme ka ị melite usoro na ọdịnaya nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere saịtị azụmahịa, nke a ga - enyere gị aka melite ọnụego mgbanwe ma nyefee gị ọhụụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime mkpebi ụfọdụ dị mkpa banyere uto nke azụmahịa gị dabere na data Google Analytics, ị ga - akwụsị spam onye ntinye aka ka ị ghara itinye aka na data gị.
Olee otú iji tufuo spam na-edekọ ihe?
Ozi ọma ahụ bụ na ọ ga-ekwe omume iwepu spam ntinye aka na data Google Analytics. Ụzọ kachasị mma bụ ịmepụta ụfọdụ nzacha na akaụntụ Google Analytics gị. Ụfọdụ weebụsaịtị na-eji bọọlụ gaa na ibe weebụ gị, ebe ndị ọzọ na-eziga nleta ndị ahụ ozugbo na akaụntụ Google Analytics gị n'enweghị ọbụna ịga na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ị nwere ike wepu ha abụọ site na ịmepụta nzacha na akaụntụ Google Analytics gị.
Maka ịmepụta ihe nzacha maka darodar.com, ị kwesịrị iburu n'uche ihe ndị a:
Banye akaụntụ Google Analytics gị ma gaa na ngalaba Admin.
Họrọ Nhọrọ Akaụntụ na Nhọrọ na ọdịda ma mepụta ihe nzacha na mpaghara nke Njikwa Echetara.
N'okpuru Ndabara Anya, ị kwesịrị ịpị nhọrọ ntinye ọhụụ ma kpọọ nza gị dị ka darodar.com.
Echefula ịhọrọ nhọta nhazi ntanetị ma họrọ Ntuziaka na Ndapụta Filter gị.
N'ebe a, ị ga-etinye darodar \_ .com na ngalaba ntanetị wee pịa bọtịnụ Nchekwa tupu imechi windo.
Gbasara ndị ọzọ na-asụ nledo spam?
Ị nwere ike ịgbakwunye ụdị nzacha ndị ahụ maka ndị nyocha ọ bụla nke na-egosi na akaụntụ Google Analytics. I kwesịrị ile anya na ngalaba ọhụrụ ndị na-apụta na data gị ma tinye ihe nzacha ọhụrụ maka ihe ọ bụla gosiri na oge.